မွေးစားတဲ့သမီး – Grab Love Story
ပိုးသားနက် ဝန်ထမ်း ဝတ်စုံလေး ဖြင့် သီရိ ခပ်သွက်သွက်လေး ရုံးခန်းသို့ဝင်လာခဲ့သည် ။ သီရိ ဆိုတာက မြူနှင်းကုမ္မဏီကြီး ရဲ့ အတွင်းရေးမှုး တစ်ယောက် ဖြစ်သလို ထို ကုမ္မဏီပိုင်ရှင် များ၏ မွေးစား သမီး တစ်ယောက် ဖြစ်သည် ။အသက် နှစ်ဆယ့်ငါး ခန့် သာ ရှိသေးသော်လည်း လူကြီးဆန်ဆန် ပင် ကျတ်သရည် ရှိစွာ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့ထား တတ်သည် ။ သူမ နှင့် ဤ စတိုင် နှင့် လည်း လိုက်ဖက် လွန်းသည် ။ မျက်ခုံးကောင်းကောင်း နှာတံဆင်းဆင်း ဖြင့် သူမ ၏ မျက်ဝန်း တို့ သည် ညို့ငင်တောက်ပလွန်းသည် ။ သူမ သည် ခပ်တောင့်တောင့်ကြီး မဟုတ်သော်လည်း သူမ အနေအထား နှင့် သူမတော့ ကြည့်ကောင်း လွန်းပါသည် ။ ” သီရိ ရောက်လာပြီလား . ဆရာ က သီရိ ရောက်ရင် အခန်း ကို လာပါတဲ့ . . ” ” ဟုတ်ကဲ့ . မမချို ” မမချို ဟူသော အမျိုးသမီး မှာ ဤ ရုံး ၏ ဝါအရင့်ဆုံး ဝန်ထမ်း တစ်ဦး ဖြစ်သည် ။
နာမည် နှင့် လိုက်ဖက်အောင် ချိုသာ လွန်းသော မျက်နှာကြောင့် သူမ မျက်နှာသည် အမြဲ ပြုံးရွှင် နေသည် ။ သို့ သော် ယနေ့မမချို တစ်ယောက် မျက်နှာ မရွှင်မလန်း ဖြစ်နေသည် ။ မမချို သာမက သီရိ မြင်သမျှ လူတိုင်း ၏ မျက်နှာများ လည်း မရွှင်မလန်း ဖြစ်နေသည် ။ သီရိ ကိုယ်တိုင် လည်း မိမိ ၏ မျက်နှာအား အတတ်နိူင်ဆုံး ညိုးငယ်ထား သည် ။ ရင်ထဲ မှာတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ သာ ဖြစ်သည် ။ သီရိ တံခါးစေ့ ရုံသာ စေ့ ထားသော တံခါး ကို အသာတွန်း ဖွင့်လိုက်သည် ။ အထဲ တွင် ဧည့်ခန်းပမာ သေသပ်လှသော အသုံးအဆောင် ပရိဘောဂ များ နှင့် အတူ ဦးကောင်းမြတ် ရှိနေလေသည် ။ ” အပြင်မှာ ဘာ သတင်း ရသေးလည်း . သီရိ . ” ဦးကောင်းမြတ် စိုးရိမ်မှု မကင်းသော လေသံများ ဖြင့် သီရိ ကို မေးလိုက် ခြင်း ဖြစ်သည် ။ သီရိ လည်း ဦးကောင်းမြတ် အနားရောက်အောင် လျှောက်လာပြီး မှ . ” အားလုံး ကတော့ မြူနှင်း ပြန်ပေးဆွဲ ခံရတယ် ဘဲ . သိထားတယ် . စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေကျတယ် . သူတို့ကတော့ ကိုကြီး နဲ့ သီရိ သက်ဆိုင်ရာ ကို တာဝန်ယူပြီး တိုင်ထားတယ် . ရှာနေတယ် လို့ ဘဲ ထင်နေကျတယ် . ” ဦးကောင်းမြတ် ပြုံးယောင် သမ်း သွားပြီး ” သီရိ ကိုကြီး အတွက် ကော်ဖီခါးခါးလေး တစ်ခွက် ဖျော်ပေးပါလား . ” ” ဟုတ်ကဲ့ . ” သီရိ ထို အခန်း ထဲ တွင်ပင် အသင့်ရှိသည့် ပစ္စည်းများ နှင့် ကော်ဖီဖျော်စပ် နေရင်း . ” အကိုကြီး မြူနှင်း ကို ဘာ ဆက်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားလည်း . အရမ်းကြီး ဒုက္ခ ရောက်အောင်တော့ မလုပ်ပါနဲ့ . သနားပါတယ် . ” ဦးကောင်းမြတ် ကတော့ သီရိ ၏ စကား ကို သိပ်နားဝင် ဟန် မရှိ ။ ” သီရိ သူ့ အတွက် စိတ်ပူ မနေပါနဲ့ . သူ မရှိမှ ကိုကြီး နဲ့ သီရိ ရဲ့ ဘဝ ရှေ့ဆက် တက်လမ်း တွေ ရှိမှာ . ” ” ဒါတော့ . ဒါပေါ့ . ကိုကြီး ရယ် . ဒါပေမယ့် မြူနှင်း က တစ်ခြား လူ မဟုတ်ဘူးလေ . သီရိ ကို ကျွေးမွေးစောက်ရှောက် ခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးရှင် တွေရဲ့ သမီး . နောက်ပြီး သီရိကိုလည်း မွေးစားသမီး လို မသတ်မှတ်ဘဲ သမီး အရင်းလို စောင့်ရှောက် ခဲ့ကျတာ . ” ဦးကောင်းမြတ် သက်ပြင်းချ လိုက်ပြီး . ” ဒါကတော့ သီရိ အမြင်ပါ . သီရိ ကို သမီး အရင်းလို ဆက်ဆံရင် ညီမ ဖြစ်မယ့် မြူနှင်း ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး ခိုင်းသမျှ လုပ်ရမည့် ဘဝ ကို ထားပါ မလား . ဒီတော့ ကိုကြီး ကလည်း သီရိတက်လမ်း ကိုယ်ရှာခဲ့တာ . ကဲ သီရိ လည်း ဒါတွေ သိပ်တွေးမနေနဲ့ . ” သီရိ ဖျော်လက်စ ကော်ဖီ ကို လတ်စသတ် လိုက်ပြီး ဦးကောင်းမြတ် ထံ ပေးလိုက်လေသည် ။ စိတ်တွေ ကတော့ မြူနှင်း ထံ ရောက်နေလေသည် ။
ဒါ အိမ်မက်လား . မြူနှင်း ဆိုသော ကောင်မလေး ၏ အကြည့်တွေ ဝေဝါးနေဆဲ ။ မြူနှင်း မှာ သီရိ ထက် အနည်းငယ်သာ အသက်ငယ် သည် ။ သီရိ လောက် စွဲဆောင်မှု မရှိ . မလှသော်လည်း . သူမ အနေအထား နှင့် သူမ တော့ မိန်းမလှ စာရင်း ဝင်သည် ။ ခန္တာ အချိုးအစား ကလည်း သီရိ နှင့် မတိမ်းမရိမ်း ပင် ။ စတိုင်ကတော့ ခေတ်ဆန်ဆန် နေတတ်သည် ။ မိဘများ ဆုံးပါးပြီး ကုမ္မဏီ ၏ ဒါရိုက်ကြီး တစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီ ဆိုသော်လည်း လူငယ်ပီပီ ဆိုးချင် နေသေးသည် ။ မွေးစား အမ သီရိ နှင့် မန်နေဂျာကြီး ကိုကောင်းမြတ် ပင် အလုပ်များ အားလုံး ကို မြူနှင်း ကိုယ်စား လုပ်ကိုင်ပေးနေ သဖြင့် ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စား ဘဝ ဖြင့် ကြီးပြင်း လာခဲ့သူ ဖြစ်သည် ။ အိစက်ညက်ညော နေသော မွေ့ယာ ကုတင်ထက် အိပ်ခဲ့သော်လည်း ယခု နိူးလာသော အခါ စိုစွတ်ကြမ်းတမ်းနေသော အင်္ဂတေ တစ်ခုပေါ် ရောက်ရှိနေလေသည် ။ ထိန်လင်းနေသော လျှပ်စစ်မီးရောင် အောက်တွင် အိပ်စက်ခဲ့သော်လည်း အားနည်းလှသော ခြောက်ချားဖွယ် မီးလုံးဝါလေး တစ်လုံး ၏ မနိုင်တနိင် တွန်းကန်ထားသော အမှောင်ထု အောက် ရောက်ရှိနေသည် ။ မွှေးပျံ့ သော ရေမွှေးရနံ့များ အစား ကျင်ငယ်နံ့များ သာ ရှုရိုက်နေရလေသည် ။ အေးစက်နေသော အဲကွန်း ၏ အရသာ မရှိတော့ဘဲ ပူအိုက်စက်စက် ခံစားနေရပြီး သူမ ခန္တာကိုယ် တွင် ချွေးစီးများ ပင် ထနေလေသည် ။ မြူနှင်း သူမ ကိုယ် သူမ ဘာဖြစ်နေမှန်း . ဘယ်ရောက်နေမှန်း ပင် မသိ ။ သူမ ၏ လက်ကောက်ဝတ်များ သည် လက်ထိပ်တစ်ခု ၏ နှောင်ဖွဲ့မှု နှင့် အတူ ရှိနေလေသည် ။ ထို လက်ထိပ်နှင့် အတူ ကြီးမားလှသော သံကြိုး ကြီးသည် တွဲလျှက် ရှိပြီး ကျောက်သား နံရံကြီး နှင့် ချိတ်ဆက်နေသည် ။ မြူနှင်း အားယူ ကာ လူးလဲ ထလိုက်သည် ။
သူမ ရပ်နေသည့် နေရာ တစ်ဝိုက်မှ အပ ဘေးပတ်လည် ကောင်းစွာ မမြင်ရ ။ မြူနှင်း အရဲစွန့် ကာ ရှေ့သို့လှမ်းကြည့်သည် ။ ဆယ်ငါးလှမ်း ခန့် ၌ ပင် သံကြိုးဆုံးပြီး ဆက်သွား မရတော့ပေ ။ မြူနှင်း ကြောက်စိတ်များ ဖုံးလွှမ်း လာပြီး အော်ဟစ် အကူညီ တောင်းကြည့်သည် ။ ” ကယ်ကျပါအုန်း ရှင့် . ကျွန်မ ဒုက္ခရောက်နေ လို့ ပါ . ” ” မင်း ကို ဘယ်သူ မှ မကယ်နိူင်ဘူး . မိန်းကလေး တိတ်တိတ်နေ . ” အမှောင် ထဲ မှ ထွက်ပေါ် လာသော အသံရှင်ကြောင့် မြူနှင်း ထိတ်လန့် ပြီး ခြေလှမ်းများ နောက်ဆုတ် လိုက်ရသည် ။ အမှောင် တွင်း မှ လူရိပ်တစ်ခု ထွက်လာလေသည် ။ သန်မာ ထွားကျိုင်းသော အမျိုးသား တစ်ဦး ဖြစ်သည် ။ ဝတ်ရုံနက် ဝတ်ထားကာ မျက်နှာဖုံးတပ် ထားလေသည် ။ မြူနှင်း လည်း . ” ရှင် ဘယ်သူလည်း . ဘာလို့ကျွန်မ ကို ဖမ်းထားတာလည်း . ပိုက်ဆံ အတွက် လား . ပိုက်ဆံ အတွက်ဆို ကျွန်မ အမ သီရိ ကို ဖုန်းဆက်ပေးမယ် . . ရှင်ဘယ်လောက် လိုချင်လည်း . ” ” ကောင်မ စကားရှည်တယ် . တိတ်တိတ်မနေဘူး . . ” မျက်နှာဖုံး နှင့် လူသည် သူမ သန်မာ သော လက်ဖြင့် မြူနှင်း အား လက်ပြန်ရိုက်ပစ် လိုက်သည် ။ မြူနှင်း အဖို့ခံနိူင်ရည် မရှိဘဲ ပုံရပ်သား လဲကျကာ သတိမေ့မြော သွား လေသည် ။ မြူနှင်း သတိပြန်ဝင် လာသော အခါ မြူနှင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ် နေသည် ။ မျက်နှာ တစ်ခြမ်းလည်း အတော် နာကျင်နေသေး သည် ။ နူတ်ခမ်း မှ စပ်ဖြင်းဖြင်း ဝေဒနာ ခံစားနေရပြီး သွေးစလေး တစ်ချို့  စွန်းထင်နေလေသည် ။ မြူနှင်း ထို ဝေဒနာ တွေ ထက် အခက်တွေ့ရသည့် ပြသနာ ရှိသည် ။ ထိန်း၍ မရသော ကိစ္စ ကို မည်မျှ မှ ထိန်းချုပ် ထားသော်လည်း မတတ်သာတော့ပေ ။ ထို ကိစ္စ မှာ အပေါ့သွားလိုခြင်း ဖြစ်သည် ။ ဝတ်ရုံနက်ဖြင့် လူက မိမိ အား မျက်စေ့ဒေါက်ထောက် ထိုင်ကြည့်နေ သဖြင့် ထိုင်ပေါက်၍ မရ ။ ဘောင်းဘီ ထဲ ပေါက်ချ၍လည်း မဖြစ် ။
မြူနှင်း မနေသာသည့် အဆုံး ။ ” ဟိုလူကြီး ကျွန်မ ရှူးပေါက်ချင်လို့. ခဏ ရှောင်ပေးပါလား . . ” မျက်နှာဖုံး နှင့် လူသည် . ” မင်း ဘာတွေ ပြောပြော ငါကတော့ မင်းကို စောင့်ကြည့်နေမှာဘဲ . ” ” မဟုတ်ပါဘူး ရှင့် . ကျွန်မ တစ်ကယ် ရှူးပေါက်ခြင် လို့ ပါ . ” မျက်နှာဖုံး နှင့် လူကလည်း အလျော့မပေးဘဲ ရစ်သည် ။ ထိုင်နေသော ခုံအောက်မှ သံပုံး အနက် ကို မြူနှင်း ထံ ကန်ပေးလိုက်ပြီး . ” မနေနိူင်ရင် အဲ့မှာပေါက် . ထပ်ပြီး အထွန့် မတတ်နဲ့ . ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့ ဒီနေရာမှာ မင်းလို မိန်းမလှလေး ကို ငါ ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးနော် ” မြူနှင်း ကျတ်သီးပင် ဖြန်းခနဲ ထသွားသည် ။ မြူနှင်း မဖြစ်မနေ တစ်ခုတော့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ အရှက်တော့ အကွဲမခံနိူင် အောက်ခံဘောင်းဘီ တော့ အစို ခံလိုက်မည် ။ မြူနှင်း ဘောင်းဘီရှည် ကို အသာလေး ဆွဲကျလိုက်သည် ။ မျက်နှာများ ပူသော်လည်း အသိစိတ်ထဲ မှာ ထိုလူ ကို ခဏ ဖျောက်ထား လိုက်ပြီး သံပုံး ပေါ် ခွထိုင်ချလိုက်ပြီး စိတ်လွှတ်ကာ အပေါ့သွား လိုက်လေသည် ။ အတန်ကြာ ချုပ်တီး ခဲ့ သဖြင့် ကြောင့်လား မသိ သေးကြောရှည် နေတော့သည် ။ မျက်နှာဖုံး လူကတော့ မိမိ၏ အောက်ခံဘောင်းဘီ နှင့် သေးစီးကျနေခြင်း ကို ကြည့်နေသဖြင့် မြူနှင်း မျက်ရည်များ ဝဲလာသည့် အထိ ရှက်စိတ်မွှန် ခဲ့လေသည် ။ ” မင်း အရမ်းလှတာဘဲ ကွာ ” မြူနှင်း နောက်ဆုတ်ရင်း ဘောင်းဘီ ပြန်ဝတ်လိုက်လေသည် ။ မျက်နှာဖုံး နှင့် လူ သည် မြူနှင်း အနားကပ် လာလေသည် ။ မြူနှင်း ကြောက်စိတ်များကြောင့် အသားများ ပင် တုန်လာလေသည် ။ မျက်နှာဖုံး နှင့် လူသည် မြူနှင်း အနားကပ်ထိုင် လိုက်ပြီး မြူနှင်း ၏ ရင်သားများ ကို ဖမ်းကိုင်လိုက်လေသည် ။ ” ရှင် ဘာလုပ်တာလည်း . ကယ်ကျပါအုန်းး ” မြူနှင်း အသံများ ပဲ့တင် ထွက်လာ လေသည် ။ ” သီရိ အကိုကြီး ကို ပြုစု တာ အရမ်းကောင်း တာဘဲကွာ . ” မိန်းမလှလေး ၏ နူးညံ့သော နူတ်ခမ်း အစုံဖြင့် မိမိ ၏ လိင်တံ ကို သူမ ပါးစပ်ထဲ စုပ်ယူပေးနေ သဖြင့် ဦးကောင်းမြတ် သဘောတွေ့ နေလေသည် ။ မြူနှင်း တို့ ၏ အိမ်ကြီး တွင် မြူနှင်း မရှိသဖြင့် ဦးကောင်းမြတ် သီရိ နှင့် အပြတ်ကဲနေလေသည် ။ ကုတင်ကြီးပေါ်တွင် ဇိမ်နှင့် ထိုင်နေသည် ။ ခုတင်အောက် တွင် သီရိ အား ဒူးထောက် လျှက်သား သူ၏ လိင်တံ အား စုပ်ခိုင်း ရင်း ဘီယာ သောက်ကာ စည်းစိမ်ခံစား နေလေသည် ။ ဦးကောင်းမြတ် သည် အကြံကြီးသူ ဖြစ်သည် ။ အရင် မြူနှင်း တို့ ၏ မိဘများအား လုပ်ကြံ ခဲ့သည် ။
ပြီးနောက် မြူနှင်း ကို အပိုင်ကြံသည် ။ မြူနှင်း မှာ ဦးကောင်းမြတ် အား အခွင့်အရေး မပေးဘဲ ပညာသားပါပါ ရှောင်ထွက်ခဲ့သည် ။ ထို့ ကြောင့် ရုပ်လည်းချော . ကိုင်တွယ်ရလည်း လွယ်သည့် သီရိ ကို အပိုင်ချုပ်ခဲ့သည် ။ စီစဉ် သည့် အတိုင်းပင် သီရိ သည် ဦးကောင်းမြတ် ပုံသွင်း၍ ရသည့် ဖယောင်းရုပ် ဖြစ်နေလေသည် ။ ဦးကောင်းမြတ် အဖို့သီရိ ကို အဝ အသုံးချပြီးလျှင် ရှင်းထုတ်ရန် ကြံစည် ထားသူ ဖြစ်သည် ။ သီရိ အဖို့မသိရှာပေ ။ ဦးကောင်းမြတ် ၏ ဆေးမိ နေလေသည် ။ ယခု လည်း ဦးကောင်းမြတ် ကျေနပ်အောင် ဦးကောင်းမြတ် ကြိုက်တတ်သည့် ပုံစံ အတိုင်း ကျိုးကျိုးနွံနွံဖြင့် ဦးကောင်းမြတ် ၏ လိင်တံ ကို ထိထိမိမိ စုပ်ပေး နေလေသည် ။ ဦးကောင်းမြတ် ဘီယာ နှစ်ခွက် ကုန်အောင် ဇိမ်ပြေနပြေ သောက်ပြီး နောက် ပြီးချင် လာသည် နှင့် သီရိ ပါးစပ်ထဲ တွင်ပင် ပြီးလိုက်ပြီး အရည်များ ပင် သီရိ ကို မြိုချ ခိုင်းလေသည် ။ ပြင်ပ တွင် တည်ကြည် ကျတ်သရည် ရှိသော သီရိ သည် ဦးကောင်းမြတ် ရှေ့တွင် မှု ကြေးစားဖာသည်မ ထက်ပင် သိက္ခာ မရှိသော မိန်းမ အဖြစ် ခံယူစိတ်နစ် ပြုစုသူ ဖြစ်သည် ။ ဦးကောင်းမြတ် သူ၏ ဘောင်းဘီ အား ဇစ်ပြန်တက် ပြီး နောက် . ” သီရိ ကိုကြီး အပြင် သွားအုန်းမယ် . သီရိ မအိပ် နဲ့အုန်းနော် . ” ” ကြာမှာလား . အကိုကြီး . သီရိ တစ်ယောက် ထဲ ကြောက်တယ် . ” ဦးကောင်းမြတ် သူ၏ ထုံးစံ အတိုင်း သီရိ ကို တစ်ခုခု လုပ်ခဲ့မည် ဖြစ်သည် ။ သီရိ ကလည်း ထို အရာများကြောင့် ဦးကောင်းမြတ် ကို စွဲနေခြင်း ဖြစ်သည် ။ ” သီရိ ကို ဒီတိုင်း မထားခဲ့ပါဘူး . နိပ်စက်ပြီး ထားခဲ့မှာ . ” ” ဟင့် သီရိ ခန္တာကိုယ် အသွေးအသား ကို ကိုကြီး ပိုင်တယ် . ကြိုက်သလို လုပ်ပါ . သစ္စာမဖောက်ရင် တော်ပြီ ” ” ကောင်းပြီ ” အိမ်ကြီး ကြီးသလောက် ခြံကြီးလည်း ကျယ်သည် ။ ခြံစောင့် နှင့် အိမ်ဖော် သည် ဦးကောင်းမြတ် ၏ လူများ ဖြစ်သည် ။ ” သီရိ ခံစားချက် အသစ် ခံစားရအောင် စီစဉ်ထားတယ် . ” ” ဘယ် လိုလည်း . ကိုကြီး . ” ဦးကောင်းမြတ် သူ၏ အစီအစဉ် များ ထဲတွင် သီရိ နှင့် မြူနှင်း ကို စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားကာ ဖာသည် ထက် ဆိုးသော မိန်းမများ ဖြစ်အောင် လုပ်မည် ဖြစ်သည် ။
အနူနည်း မရသော မြူနှင်း ကို အကြမ်းနည်း သုံးရသလို . မွှန်နေသော သီရိ ကို အနုနည်း သုံးမည် ဖြစ်သည် ။ ” ခြံစောင့် နဲ့ အိမ်ဖော် ခု အိမ်မှာ မရှိဘူး . ညကလည်း နက်နေပြီ ဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်လည်း အိပ်ကုန်ကျပြီ . သီရိ ကို ခြံထဲ က သစ်ပင်အောက် မှာ နိပ်စက်ပြီး ထားခဲ့ချင်တယ် . ” ” ဟာ ကိုကြီး အပြင်ကြီးမှာ . ” ဦးကောင်းမြတ် သီရိ အပြောကို မကျေနပ် . ” သီရိ မငြင်းရဘူး . ဒါကိုကြီး အမိန့်” သီရိ မှာ ငြင်းဆန်ဖို့အင်အား မရှိပါဘူး . သီရိ ကိုယ်၌ က ကျွန်စိတ် ပါနေတာ . . . ” ကိုကြီး သဘောပါ . ” အေးစက်နေသော ဆောင်းည ဖြစ်သော်လည်း . သီရိ ရင်တွင်း အပူကြောင့် မချမ်းအားပါ . အပေါ်ပိုင်း ဗလာကျင်း ပြီး အတွင်းခံလေး တစ်ထည်သာ ရှိသည့် သီရိ အလှသည် ကျက်သီးထဖွယ် ရှိသည် ။ သစ်ကိုင်းမှ တွဲကျနေသော ကြိုးသည် သီရိ လက်မြောက်ထားမှ လက်ထိပ်နှင့် ကွက်တိ ချိတ်ဆက် လျက်သား ဖြစ်သည် ။ တကျီကျီ နှင့် မြည်နေသော တုန်ခါစက်ပါ လိင်တံ အတု သည် အောက်ခံ အတွင်းမှ သီရိ ၏ စောက်ဖုတ်အတွင်း မွှေနောက်နေသည် ။ ” သီရိ ပါးစပ်ဟ လိုက် . ” ဦးကောင်းမြတ် အမိန့် ကြောင့် သီရိ ပါးစပ်ဟ လိုက်သည် ။ သီရိ ပါးစပ်ထဲ အဝတ်စ တစ်ခု လုံးထွေး ဝင်လာလေသည် ။ ပြီးနောက် တိပ်ဖြင့် ပါးစပ် ပိတ်ခံလိုက်ရသည် ။ ဦးကောင်းမြတ် ပြုံးကာ . ” အဲ့ဒါ သီရိ တို့အိမ်က အိမ်ဖော်မြမြ ရဲ့ အောက်ခံလေ . အိမ်ရှင် ဆိုပေမယ့် အိမ်ဖော်မ ရဲ့ အောက်ခံ ပါစပ်ထဲ ထည့်ထားရတဲ့ ဖီးလ် သိစေချင်လို့. ကဲ ကိုကြီး သွားပြီ ” အိမ်၏ အပြင် . ခြံကြီး အတွင်း သီရိ ခံစားချက် ပေါင်းစုံဖြင့် ကျန်ခဲ့လေသည် ။ နှစ်နာရီခန့်အကြာ ဦးကောင်းမြတ် ကားဖြင့် ပြန်ဝင် လာလေသည် ။ ခြံထဲ ရှိ သစ်ပင် တွင် ဖင် တုံးလုံး ဖြင့် သီရိ အဖုတ် ထဲ မွှေနေသော လီးတု ကြောင့် မြော့နေလေသည် ။ ဘတ်ထရီကုန် သဖြင့် တုန်ခါမှု မရှိတော့ ။ သီရိ လည်း နူန်းချိနေပြီ ဖြစ်သည် ။ ဦးကောင်းမြတ် ကားရပ်လိုက်ပြီး သီရိ ထံ လျောက်လာ လေသည် ။
သီရိ ကို နှောင်ဖွဲ့မှု မှ လွှတ်ပေး လိုက်သည် ။ မြူနှင်း ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုယိုနေလေသည် ။ ဘီးတပ် ထားသော ပက်လက်ကုလားထိုင် တစ်ခု ပေါ်တွင် မြူနှင်း ပြဲပြဲကားကား အနေအထား ချုပ်နှောင် ခံထားရသည် ။ အဝတ်အစား မရှိ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သည် ။လက်များ သည် နောက်မှီတွင် စုချည်ခံထားရ သဖြင့် နို့ နှစ်ဖက် ကို အကာအကွယ်မဲ့ ပြသ ထားရသည် ။ ပေါင်ဖြဲထားရသဖြင့် စောက်ဖုတ် နှစ်ခြမ်းပါ ဖြဲပြ ထားသလို ဖြစ်နေသည် ။ ကြိုးများကြောင့် ပေါင်ပြန်စု၍ မရချေ ။ မျက်နှာဖုံး နှင့် လူသည် မြူနှင်း ကို တွန်းကာ အမှောင်လမ်း အတိုင်း သွားနေလေသည် ။ ” ကျွန်မ ကို ဘယ်ခေါ် သွား မလို့ လည်း ဟင် . . ” မျက်နှာဖုံး လူသည် မည်သည့် စကား မှ မပြောဘဲ တံခါးကြီး တစ်ခု ၏ ရှေ့တွင် ရပ်ပြီး တစ်စုံတစ်ခု ကို စောင့်နေလေသည် ။ လှေကား သို့ဆင်းလာသော ခြေသံ တစ်ချိုံကိုလည်း ကြား နေရလေသည် ။ ထို ခြေသံများသည် မြူနှင်း ၏ ရင်ဘက် ကို ပစ်နေသော ဒုံးကျည်များ ပမာ ဖြစ်နေလေသည် ။ မြူနှင်း အားကုန်း ရှုန်းနေပေမယ့် လှုပ်၍ အရှင်းမရပေ ။ တံခါးကြီး ပွင့် လာလေသည် ။ လူ နှစ်ယောက် ဖြစ်သည် ။ မြူနှင်း ရင်ထဲ သံပူရည် နှင့် အလောင်း ခံလိုက်ရသလို ခံစားလိုက်ရသည် ။ ယခု ဆိုလျှင် မြူနှင်း ရဲ့ လျှိုဝှက် အင်္ဂါတွေ ကို မြင်ဖူးသူ သုံးယောက် ဖြစ်သွားပြီ ဖြစ်သည် ။ ထို လူနှစ်ယောက် မှာ မျက်နှာဖုံး ကိုယ်စီဖြင့် ဖြစ်သည် ။ ဦးကောင်းမြတ် နှင့် အိမ်ဖော်မြမြ ဖြစ်သည် ။ မြူနှင်း ကို ချုပ်ထားသော သူမှာ ခြံစောင့် ကိုထွေး ဖြစ်သည် ။ အသံဖျက်ပြော သဖြင့် မြူနှင်း အဖို့မည်သူမှန်း မသိနိူင် ။ ဦးကောင်းမြတ် သည် ဘောင်းဘီဇစ်ကို ဖွင့်လိုက်လေသည် ။ ငေါက်ခနဲ ထွက်လာသော လိင်တံကြောင့် မြူနှင်း ကျက်သီး ထသွား လေသည် ။ ကိုထွေး သည် ခုံကို ဖိလိုက်ပြီး မြူနှင်း ကို နည်းနည်း လှန်လိုက်သည် ။ မြူနှင်း အဖို့မဖြစ်မနေ အစော်ကားခံရတော့မည် ဖြစ်သည် ။ မြူနှင်း ၏ မာန အတိုင်း တောင်းပန်မနေတော့ဘဲ အံကျိတ်ကာ မျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီး ဖြစ်လာ သမျှ ရင်ဆိုင်ရန် အားမွှေးထား လိုက်သည် ။ ဦးကောင်းမြတ် လည်း သူ၏ လိင်တံ ကို ကိုင်ကာ မြူနှင်း အဖုတ် ကို တေ့ကို ဖိသွင်း လိုက်လေသည် ။
မြူနှင်း နာကျင်မှုကြောင့် သည်းခံထားသော် လည်း အသံထွက် အော်လိုက် မိ လေသည် ။ ထို အခါ ဦးကောင်းမြတ် ဆတ်ခနဲ ငြိမ်လိုက်ပြီး ” ငါ ဒီ အသံ ကို မုန်းတယ် . ပါးစပ် ပိတ်လိုက် . ” နောက်မှ မြမြ ကို ပြောလိုက်သည် ။ မြမြ လည်း သူမ ထမိန်အောက် မှ သူမ ၏ အောက်ခံဘောင်းဘီ ကို အလိပ်လိုက် ချွတ်ချလိုက်ပြီး မြူနှင်း ပါးစပ် ကို အတင်း လာစို့ လေသည် ။ သုံးယောက် တစ်ယောက် လည်း ဖြစ် ပြန် . အနှောင်အဖွဲ့ နဲ့ မြူနှင်း အဖို့သူတို့ ပြုသမျှ နုရတော့သည် ။ ဦးကောင်းမြတ် ရဲ့ လိုးစောင့်ချက်များ ကို အံတုရင်း မြူနှင်း မြန်မြန် ပြီးပါစေ ဘဲ ဆုတောင်း နေရလေသည် ။ အင့် ဟူသော အသံ နှင့် အတူ ဦးကောင်းမြတ် လိင်တံ ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီး မြူနှင်း မျက်နှာပေါ် သုတ်ရည်များ ပန်းထုတ် လိုက်လေသည် ။ ပြီးနောက် ဘောင်းဘီ ပြန်ဝတ်ကာ . ” နင် တို့နှစ်ယောက် ဆက် ပြုစု လိုက်အုန်း ” ဟု ပြောပြီး ရုံးသို့ပြန်သွား လေသည် ။ ထို အခါ မြမြ သည် မြူနှင်း မျက်နှာ အား ထမိန် ဖြင့် ခွလိုက်ပြီး စပ ဖြင့် ပွတ်လေသည် ။ ကိုထွေး ကတော့ သူ၏ လိင်တံ ဖြင့် မြူနှင်း အဖုတ် ကို ရှယ်ပြုစု တော့သည် ။ သီရိ ညတုန်း က အိပ်ရေး ပျက်ထား သဖြင့် ဒီနေ့အလုပ်တွင် မလန်းပေ ။ သွားလာ လှုပ်ရှားမှု လည်း မလုပ်ချင်ပေ ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သီရိ စပ ထဲ ဦးကောင်းမြတ် အဝေးထိန်း ကျင်စက် ထည့်ထားသော ကြောင့် ဖြစ်သည် ။ မည်သူ မှ မသိသော်လည်း သီရိ ကိုယ့် ကိုကိုယ် စိတ်မလုံချေ ။ သီရိ ခုံလေး ကို မှီကာ ခဏ မှိန်းနေလိုက်သည် ။ ” အမလေး တော့ . . ” သီရိ လန့် အော်လိုက်မိပြီး ချက်ချင်း ပြာသွား လေသည် ။ ဘေးမှ ဝန်ထမ်းများ စိုးရိမ်တကြီး ပြေးလာ လေသည် ။ သီရိ အဖုတ် ထဲမှ ဝေဒနာ လည်း ချက်ချင်း ရပ်သွား လေသည် ။ သီရိ ပြုံးပြီး အခန်းထဲ ဝင်သွားသော ဦးကောင်းမြတ် ကို သာ မြင်လိုက်တော့သည် ။ သီရိ တစ်နေ့ လုံး ဦးကောင်းမြတ် ကြောင့် အလုပ်ကောင်းကောင်း မလုပ်ရပေ ။ သီရိ အရမ်းပင်ပန်း နေသဖြင့် ဒီည ဦးကောင်းမြတ် ကို အဖော်မပြု နိူင်တော့ဘဲ စောစော အိပ်ပစ် လိုက်လေသည် ။ သီရိ ညနက်ခန့် တွင် တရေးနိူးပြီး အပေါ့အပါး ထ သွားလေသည် ။ အိမ်နောက်ဘက် အရောက်တွင် လူနှစ်ယောက် ကြောင့် သီရိ ပုန်းနေလိုက်သည် ။ မိမိ သခင် တစ်ယောက် ပမာ ကိုးကွယ်နေသော ဦးကောင်းမြတ် သည် သီရိ တို့အိမ်မှ အိမ်ဖော် မြမြ ဟူသော မိန်းမ ၏ အဖုတ် အား အရသာရှိသော သကြားပြား ကဲ့သို့ယက်နေသည် ကို မြင်လိုက်လေသည် ။
ဦးကောင်းမြတ် သီရိ ကိုပင် တစ်ခါမျှ ယက်မပေးဖူး . သီရိ ချောင်းကြည့်ရင်း ရေငတ်သလို ဖြစ်လာ လေသည် ။ ” ကောင်းလား မြမြ . ” ” ကောင်းပါတယ် .ဒါနဲ့ သီရိ နဲ့ မြူနှင်း ကို ဘာဆက် လုပ်မလည်း ဆရာ ” ” မြူနှင်း ကိုတော့ ခွေးကျွန်မ ဖြစ်အောင် ကျင့်ပေးမယ် . သီရိ ကိုလည်း ခွေးကျွန်မ လုပ်မယ် . ငါတို့ကစားလို့ ဝ ရင် နေရဲမာန် တို့ ဂိုဏ်း ကို နှစ်ယောက်စလုံး ရောင်းစားပစ်လိုက်မယ် . မကောင်းဘူးလား . ” ” ကောင်းတယ် ဆရာ . ဒါကောင်းတယ် . ကျွန်မ လေ မနေ့ က သီရိ ကျွန်မ အတွင်းခံငုံထားတာ မြင်တော့ သီရိ ယက်ပေးတာ အရမ်းကို ခံချင်နေပြီ ဆရာရယ် . ” နားထောင် နေသော သီရိ တုန်လှုပ်သွားလေသည် ။ သီရိ ဘာလုပ်ရမှန်းပင် မသိတော့ . မိမိ ၏ ရှုးမိုက်မှု ကြောင့် ညီမလေး မြူနှင်း ပါ ဒုက္ခရောက်နေသည့် အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိသွားသည် ။ သီရိ အသာလေး အခန်းထဲ ပြန်လာခဲ့ လေသည် ။ သီရိ မသိချင်ယောင်ဆောင် ကာ စောင်ခြဲုနေလိုက်သည် ။ သီရိ အမှားတွေ အတွက် နောင်တ ရမိလေသည် ။ မြူနှင်း ကို ပေးဆပ်၍ မကျေသည့် အပစ် လုပ်မိပြီ ဖြစ်သည် ။ ဦးကောင်းမြတ် မရှိတုန်း သီရိ မြမြ ထံ သွားလိုက်သည် ။ ” ဘာခိုင်းစရာ ရှိလည်း မမလေး ” သီရိ ပိုက်ဆံထုပ် ကို မြမြ လက်ထဲ ပေးလိုက်ပြီး သီရိ အဝတ်တွေ ချွတ်ချလိုက်သည် ။ မြမြ လည်း ကြောင်စီစီ ဖြင့် ကြည့်နေလေသည် ။ သီရိ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားပြီးသော အခါ ခွေးလည်ပတ် ကို သီရိ လည်ပင်း မှာ သေချာတပ် လိုက်ပြီး သံကြိုး ကို မြမြ လက် အပ်လိုက်သည် . ပြီးနောက် မြမြ ရှေ့ ဒူးထောက်ကာ မြမြ ခြေထောက် ကို နမ်းလိုက်ပြီး ။ ” နင် ငါ့ကို နင်ရဲ့ ခွေးကျွန်မ တစ်သက်လုံး ဖြစ်စေချင်လား . ဖြစ်ရမယ် . ဒါပေမယ့် ကတိ တစ်ခုတော့ ပေးရမယ် . ” ” ဘာ . ဘာ ကတိလည်း မမလေး ” မြေအောက်ခန်း ထဲ သီရိ ဝင်လာ လိုက်သည် ။ မြူနှင်း ကို ချုပ်ထားသော အခန်း မရောက်မှီ ကိုထွေး နှင့် တွေ့လေသည် ။ သီရိ ကိုထွေး ၏ အနားသွာကာ ပိုက်ဆံထုပ် ပေးလိုက်ပြီး တီးတိုးပြောဆို လိုက်သည် ။ ကိုထွေး လည်း အတန်ငယ် စဉ်းစားပြီးနောက် လက်ခံဟန် ပြင် မြူနှင်း ကို ထားသော အခန်းထဲ ဝင်လိုက်လေသည် ။ အထဲ တွင် ဦးကောင်းမြတ် မြူနှင်း ကို လီးစုပ်ခိုင်း ထားလေသည် ။
အလိုမကျလျှင် နိပ်စက်ခံရသဖြင့် မြူနှင်း အသားမနာစေရေး အတွက် ဦးကောင်းမြတ် လီးကို ကျေနပ်အောင် စုပ်ပေးနေရသည် ။ ထိုစဉ် ကိုထွေး သည် ဦးကောင်းမြတ် ၏ ခေါင်းကို တုတ်ဖြင့် ရိုက်ချလိုက်သည် ။ ဦးကောင်းမြတ် ချက်ချင်း သတိလစ် သွားလေသည် ။ ထို အခါ မှ ကိုထွေး သည် ” မမလေး . မမလေး အဆင်ပြေလား . ” ဟု ဆိုကာ မြူနှင်း ကို ကယ်တင် လိုက်လေသည် ။ မြူနှင်း လည်း အချုပ်လွတ်သည် နှင့် လဲနေသော သူ၏ မျက်နှာဖုံး ကို ခွါကြည့် လိုက်ပြီး လန့် သွားလေသည် ။ ” ဦး . ဦးကောင်းမြတ် ” ကိုထွေး လည်း . ” ကျွန်တော် ကို ခွင့်လွှတ်ပါ မမလေး . မမလေး သီရိ နဲ့ ဦးကောင်းမြတ် အကျပ်ကိုင် လို့လုပ်ရတာပါ . ” မြူနှင်း မျက်လုံးပြူး သွားသည် ။ ” မမသီရိ က ငါ့ကို ဒီလို ဖြစ်စေချင်တာလား ” နှစ် အနည်းငယ် အကြာ . . . မြူနှင်း အရာရာ ရင့်ကျက်သူ ဖြစ်လာပြီ ဖြစ်သည် ။ မြူနှင်း ကုမ္မဏီ ကို က်ုယ်ပိုင် နိုင်နင်းအောင် အုပ်ချုပ် နေပြီ ဖြစ်သည် ။ မြူနှင်း သည် သီရိ ကို မြေအောက်ခန်း ထဲတွင် ပြန်လည် ဖမ်းချုပ် ထားခဲ့သည် ။ ထိုသို့ဖြစ်အောင် သီရိ ကိုယ်တိုင် အကွက်ချခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ။ မြမြ နှင့် ကိုထွေး ကို သီရိ ကို စောင့်ကြည့်ဖို့မြူနှင်း တာဝန်ပေး ထားသည် ။ မြူနှင်း ကတော့ အမြဲ မလာဖြစ်ပေ ။ မြူနှင်း ရောက်သည့် နေ့သည် သီရိ ၏ ငရဲခန်း ဖြစ်သည် ။ အဝတ်အစား ဆိုသည့် အရာကို ဝတ်ခွင့်မဲ့ခဲ့ သော သီရိ သည် အချိန်ပြည့် ခွေးမ လိုသာ နေခဲ့ရသည် ။ မြမြ ၏ ခွေးကျွန်မ ဖြစ်သလို ကိုထွေး ၏ အခမဲ့ ဖာသည်မ လည်း ဖြစ်သည် ။ မြူနှင်း သည် သီရိ ကို ကြာပွတ် ဖြင့် ရောက်တိုင်း အားရအောင် ရိုက်သည် ။ စောက်ဖုတ် ယက်ခိုင်းသည် ။ တစ်ခါ တစ်ရံ တော့ သူမ ကိုယ်တိုင် သီရိ နည်းတူ ခွေးလည်ပတ် ဖြင့် ကိုထွေး အလိုးကို ခံရင်း မြမြ စောက်ဖုတ် ဖြင့် ပွတ်ခြင်း ခံခဲ့လေသည် ။ နောက်ဆုံးတော့ မြူနှင်း သည် သီရိ ၏ သခင်မ ဖြစ်သော်လည်း မြမြ နှင့် ကိုထွေး ထံ ကျွန်ခံချင် စိတ်သာ ဖြစ်မိသည် ……… ပြီးပါပြီ။